आज शहिद दिवस, को कस्ले जिन्नुहुन्छ हाम्रा शहिदहरूलाइ? चिन्ने जतिले सम्मान स्वरूप शेयर गराैं – PathivaraOnline
Home > समाचार > आज शहिद दिवस, को कस्ले जिन्नुहुन्छ हाम्रा शहिदहरूलाइ? चिन्ने जतिले सम्मान स्वरूप शेयर गराैं
काठमाडौँ । आज माघ १६ गते अर्थात शहीद दिवस, प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी शहीद दिवस मनाइँदैछ ।हरेक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने गरिन्छ भने १६ गते शहीद दिवसको रुपमा ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरी उनीहरुलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ ।
२०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते शहीदको सम्झनामा दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको छ । शहीद दिवसका अवसरमा बिहान शान्तिवाटिका रत्नपार्कदेखि शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।